आहा ! मेेराेे भान्सा
रूपा राजवंशी /
मेरो भान्सा उदास छ , उजाड छ । भान्सा घरका सबै टाटीहरु भत्किसके । नलिपेको नपोतेको निकै भयो । गड्यौला र मुसाले माटो उक्काएर हेर्नै नहुने बनाइसके । ती माटाका टाटी दुलो परिसक्यो । दुई वर्ष नछाउँदा छानो पनि चुहिन थालिसक्यो । माटोको चुल्हो सबै भत्किसके ।अब त त्यो भान्सामा चियाउन पनि मन लाग्न छोड्यो ।
आहा ! कति राम्रो भान्सा भनेर मेरो तारिफ गरेको मलाई संझना छ । सनक्क लिपपोत गरेको चिटिक्क परेको मेरो भान्सा सबैको नजरमा परेको थियो । सफा अनि चिटिक्क भान्सा र भान्सामा पाक्ने मीठो परिकारले सबैलाई लोभ्याउँथ्यो । भन्ने गर्थे– यो तपाईहरुको सभ्यता हो कला हो, यसलाई छोड्नु हुन्न है ! म त्यस्ता कुरामा मख्ख पर्थे ।मानौं, म भरिपूर्ण छु , सम्पूर्ण छु । सोच्थे– मलाई कुनै दुख छैन , हुने पनि छैन । गरिखाएकै छु पछिसम्म यसरी नै गरिखाने छु ।
भान्सामा दिनहुँ नयाँ–नयाँ र फरक–फरक प्रकारका परिकार पाक्ने गथ्र्यो । खानेहरुले भन्ने गर्थे तपाईको हातमा जादु छ कि चमत्कार ? ओहो केको जादु , मन लगाएर पकाए त्यसै मीठो भइहाल्छ नि ! पकाउने तरिका जान्नु पर्यो । अलिक चहकिलो बनाउन सक्नु पर्यो स्वादिष्ट बनिहाल्छ नि ।
यो जाडोको मौसममा भक्का (भाका), पीठ (बगिया) पाक्ने गथ्र्यो भान्सामा । राति नै चामलको पिठो ओखलीमा कुटेर विहानै तात–तातो भक्का खानेहरु कम्ती रमाउँदैनथे । अघिल्लो राति पकाएको बुवाली माछाको बासी तरकारी जुन जमिसकेको हुन्थ्यो , त्यससँग भक्का चोब्दै खानेहरु रमाएको देख्दा मलाई पनि औधी खुशी लाग्थ्यो । लाग्थ्यो यसरी नै सधैभरि खुवाइरहन पाऊँ अनि खाइरहन पाऊँ ।
त्यो पेल्का साग कहिले पाक्छ भनेर सोधिरहन्थे । पेल्कासँग माछा खाएको स्वाद पाएर होला पेल्काको कुरा गरिरहन्थे । कतिले त यो पेल्का कसरी पकाइन्छ भनेर सिक्न पनि आए । मैले सिकाइदिएँ जाने कि जानेनन् थाहा भएन । शुरु–शुरुमा पेल्का खान नआएर निकै हाँसो भएको थियो । चिप्लो पेल्का समाएर खानै नआएको । हात मुखमा पुर्याउँदा पेल्का अघि चिप्लेर भुइमा पोखिसकेको हुन्थ्यो ।
सबैको प्यारो बनेको, सबैको छहारी रहेको त्यही भान्सा अहिले रोइरहेको छ । न खाने छन् न खुवाउने । पकाएर दिने खानेकुरा केही पनि नभएपछि आउनै छोडिसके । सबै रित्तिसक्यो , सबै सकिसक्यो । म आफै भोको छु । पकाएर खाने अन्न छैन । दिनेवाला पनि कोही छैनन् । हिजो भरिभराउ थियो , आज खालीखाली भएको छ ।
अहिले बजारमा मिलको मुरै पाइन्छ । उतिबेला त घरको मात्र मुरै हुन्थ्यो ।कहिले नदेखेको त्यो घरमा भुटेको मुरैको स्वाद लिन कति आउँथे कति । मुरैसँग चनाको परिकार वाह ! घुम्नीमुरी अर्थात गाजीमुन्ढी । त्यसको स्वाद पाएर अहिले घुम्नीमुरी सबैको फेबराइट बनिसकेको छ ।त्योबाहेक बैगनको भार्ता ,सिदल (सिद्रा),कच्चुको तरकारी ,आलुको भाजीजस्ता परिकार सबैको रोजाइमा पथ्र्यो । ती भेराइटिज मेरो भान्सामा पाक्ने बेलामा बोलाउने गर्थे । मलाई पकाउन कुनै समस्या थिएन । सबै घरमै थियो । न धानचामलको दुख न तरकारीको । १० विगाह खेतको धानमध्ये सय मनजति घरमै राखिन्थ्यो । बीस मनजति त मुरै चिउरा नै कुटाउने गरिन्थ्यो । अनि त्यत्रो करेसाबारी । बारीमा नफलेको तरकारी हुँदैनथ्यो । कुनै समस्या थिएन । आफू पनि खाने अनि अरुलाई पनि खुवाउने क्या मज्जा ! त्यसो त अतिथि सत्कार गर्ने मेरो संस्कार नै हो । अतिथिलाई मेजमानी गराउन पाउँदा म आफूलाई धन्य ठान्थे ।
‘हिजो मेरो भान्सा घर सबैभन्दा राम्रो थियो । अहिले अरुका भान्सा राम्रा भएका छन् । मेरो सुत्ने कोठाभन्दा राम्रा मार्बलै मार्बलका भान्सा बनाएका छन् । मेरो भान्सामा सधै रमाउनेहरु आफ्नो राम्रो भान्सा हेर्नसमेत बोलाएका छैनन् । एकछाक खुवाउन त परको कुरा । म सोच्छु– सायद उनीहरुको भान्सामा कति मीठोमीठो परिकारहरु पाकिरहेका होलान् । पकाउने भाडाकुडा अनि खाने थालबटुका पनि कति राम्रा होलान् । खाने र खुवाउने संस्कार नै अलग होला । हाम्रोजस्तो पक्कै पनि माटोमा बसेर खादैनन् होला । एकपटक हेर्न मन छ । तर, कसैले बोलाएका छैनन् । हेर्न जान पनि डर लाग्छ । मजस्तो झुत्रीलाई हप्काए भने , जान दिएनन् भने किन अपमान सहनु । होस् मेरो भान्सा नै ठीक छ । आखिर मेरो भान्सा मेरै हो मेरो दुख मेरै हो ।’
त्यही भान्साको अग्लो धापमा धोक्रा ओछ्याएर पाहुनाहरुले लहरै पलेटी कसेर खाएको आनन्द लाग्थ्यो । दालभात तरकारीदेखि माछामासुसम्मको मेजमानी चल्थ्यो । मेजमानी गराउन पाउँदा घरका अरु मानिस पनि दंग पर्थे ।
सबैको प्यारो बनेको, सबैको छहारी रहेको त्यही भान्सा अहिले रोइरहेको छ । न खाने छन् न खुवाउने । पकाएर दिने खानेकुरा केही पनि नभएपछि आउनै छोडिसके । सबै रित्तिसक्यो , सबै सकिसक्यो । म आफै भोको छु । पकाएर खाने अन्न छैन । दिनेवाला पनि कोही छैनन् । हिजो भरिभराउ थियो , आज खालीखाली भएको छ । यी खुवाउने हात कमजोर बनिसक्यो । जोशजाँगर सबै मरिसक्यो अनि चाउरी परेका मेरा हातले काम गर्नै छोडिसक्यो ।
हिजो मेरो भान्सा घर सबैभन्दा राम्रो थियो । अहिले अरुका भान्सा राम्रा भएका छन् । मेरो सुत्ने कोठाभन्दा राम्रा मार्बलै मार्बलका भान्सा बनाएका छन् । मेरो भान्सामा सधै रमाउनेहरु आफ्नो राम्रो भान्सा हेर्नसमेत बोलाएका छैनन् । एकछाक खुवाउन त परको कुरा । म सोच्छु– सायद उनीहरुको भान्सामा कति मीठोमीठो परिकारहरु पाकिरहेका होलान् । पकाउने भाडाकुडा अनि खाने थालबटुका पनि कति राम्रा होलान् । खाने र खुवाउने संस्कार नै अलग होला । हाम्रोजस्तो पक्कै पनि माटोमा बसेर खादैनन् होला । एकपटक हेर्न मन छ । तर, कसैले बोलाएका छैनन् । हेर्न जान पनि डर लाग्छ । मजस्तो झुत्रीलाई हप्काए भने , जान दिएनन् भने किन अपमान सहनु । होस् मेरो भान्सा नै ठीक छ । आखिर मेरो भान्सा मेरै हो मेरो दुख मेरै हो ।